> Resource > Hard Drive > Sidee inuu ka soo kabsado Data dhintay ka Hard eryi
Waa maxay baabuur dhintay adag?
Marka aad hesho disk adag ee aan ka jawaabaya dambe, waxaa dhici karta inaad maqashid dhawaaqyada cunnaha laíaanta yar marka aad isku dayayso in ay kabaha ka dibna u istaago oo waa la geli karin. In xaaladda sida, aad drive disk adag noqdo dhintay.
Sidee inuu ka soo kabsado xogta ka drive dhintay adag
Waxaad ka iibsan kartaa disk cusub adag tahay in la bedelo kan dhintay si fudud, laakiin waxa aad u weligood lumin doonaa waxa ku jira. Sida aynu dib ugu heli faylasha, filimada, muusikada, sawiro, ama xataa qalliin nidaamka badbaadiyey on drive dhintay adag ka? Sida xaqiiqadu, waxaa jira hab fiican u shaqeeyaan si ay u qabtaan soo kabashada xogta drive adag dhintay .
Hel disk ah Downlaods ka hor inta aadan wax kale, kuwaas oo kaa caawin kara inaad si ay u helaan your computer hore samee. My talo: Wondershare LiveBoot Boot CD / USB , khaanada Downlaods drive CD / USB computer awood leh in kabaha kartaa computer hoos xaalad kasta.
Hel / Liveboot CD USB ​​halkan
Step1. Samee LiveBoot Downlaods CD / USB
Tallaabada mid ka mid tahay in la abuuro CD ah Downlaods ama USB, si aad kor your computer. Waxaad samayn kartaa this on computer kale.
Marka LiveBoot la bilaabay, waxaad heli doontaa interface saaxir ah soo socda. Iska aad diyaarisay maran CD ama USB drive geliyo kombuyuutarka, ka dibna raac saaxir ah oo Downlaods CD ama USB drive ah ku gubi doonaan mid click.
Geli CD ah Downlaods ama USB drive galay computer, kuwaas oo adag drive waa dhintay. Bilow F12 computer iyo saxaafada marka computer bilaabmin bilaabo. Markaas dooran "suuro ama USB CD-ROM Drive" si aad u hesho menu boot a soo socda. Halkan ka dooro mid the first to boot ka LiveBoot, taas oo aad bixisaa nidaam daahir ah iyo ammaan ah dib u soo ceshano xogta laga nidaam adiga kuu gaar ah.
Step3. Qabtaan kabashada xogta ka drive dhintay adag
Ka dib markii ay soo galaan nidaamka, abuurtaan LiveBoot oo waxaad heli doontaa suuqa kala hoose, kaas oo aad soo kaban karto xogta aad ka drive dhintay adag.
# 1. Kabsado xogta ka drive dhintay adag
Haddii aad rabto in aad kaliya inuu ka soo kabsado xogta sida waraaqaha, music, sawiro, videos, iwm ka disk adag dhintay, waxaad u tagi kartaa "Data Recovery" inuu ka soo kabsado ku jira oo dhan kuwan ka drive dhintay adag oo waxaan iyaga ku badbaadin on disk kale.
# 2. Kabsado nidaamka qalliinka ka drive dhintay adag
Haddii aad rabto in aad soo kabsadaan ka kooban in ka badan, si gaar ah oo ka hawlgala nidaam faylasha ka drive dhintay adag, waxaad u baahan tahay si ay u tagaan "Management Disk", kaas oo kuu ogolaanaya in aad Gadzhiyev drive oo dhan ay adag tahay in mid cusub, oo aad ka Boot kartaa computer drive adag oo cusub oo dhibaato la'aan.